Somaliland maxaa ku khasbay mastaafurinta Cabdiraxmaan Daba-casar? |
Somaliland maxaa ku khasbay mastaafurinta Cabdiraxmaan Daba-casar?
Dadweynaha Somaliland ee ku dhaqan Magaalada Hargeysa ayaa ka cadhooday hab-dhaqanka Nin caan ka ahaa Baraha Bulshada oo la yidhaahdo Cabdiraxmaan Dabacasar, kaasoo ay Dawladda Somaliland todobaadkan dalkeeda ka mastaafurisay, kaddib markii uu ku kacay falal shaki dhaliyey oo uu si toosa baraha Bulshada ugula wadaagay kumanaan kamid ah Dadka ku xidhan bartiisa Face-book.
Ninkan oo iska duubay muuqaalo uu ku sheegayo in jidh-dil loo geystay iyo in dhibaatooyin kale loo geystay, markii haddalo anshax xumo iyo cay isugu jirta baahiyeyna ay Booliska Magaalada Hargeysa xidheen, ayaa ugu dambeyn waxa ay dawladdu mastaafurisay Sabtidii la soo dhaafay.
Halkan ka Daawo isagoo ka cabanaya Jidh-dil:
Laakiinse hadallada foosha xun ee Ninkan iyo qaar kamid ah Taageerayaashiisu waxay ka cadhaysiiyeen Shacbiga Somaliland oo aad u dhaleeceeyey falalka uu ku kacay.
Qaar kamid ah Dadweynaha ku dhaqan Caasimada Hargeysa oo la hadlay Warbaahinta qaar, ayaa sheegay in dabacasar iyo taageerayaashiisu arrin dhaqan-xumo ah sameeyeen.
Dabacasar ayaa aad looga yaqaanaa inta badan Baraha Bulshada, isagoo kamid ah dad afraada oo ku soo caan-baxay Sheekooyin dadku xiiseeyaan oo aan xayndaab lahayn, mararka qaarna gef uu ugu geysto dhaqanka iyo asluubta wanaagsan ee Soomaalida.